ukufakwa kobushushu kwezonyango kunye nezicelo zamazinyo kushishino lonyango
Induction ukufudumeza ezonyango kunye namazinyo izicelo-zokungenisa ubushushu iinkqubo zonyango kunye namashishini wamazinyo
Ukutshisa ukutshisa isetyenziswa ngokubanzi kumashishini ezonyango kunye namazinyo. Abavelisi bezixhobo zonyango baxhamla kwitekhnoloji yokufudumeza induction. Inika okucocekileyo, okufutshane, ukuphindeka, kwaye kukhuselekile kwindalo ngenxa yokungabikho kwelangatye elivulekileyo okanye ukukhutshwa okuyityhefu. Isetyenziswa kwiilabhoratri ezincinci kunye nakwizibonelelo zemveliso ezinkulu.
Kwiminyaka yakutshanje uninzi lwamaziko ophando kwezonyango asebenzisa ukufudumeza ngokungenisa i-nanoparticle kunye ne-electromagnetic hyperthermia yophando. Isixhobo sokufudumeza i-HLQ DW-UHF siyilelwe ngokukodwa ngesi sicelo. Iinkqubo zokufudumeza i-HLQ zisetyenziswa kwiiyunivesithi ezininzi nakwizibonelelo zoPhando kwihlabathi liphela.
Ubushushu beInduction busetyenziswa njani kwiMedical and Dental Industries?
Uphando lweNanoparticle kunye nophando lwehyperthermia kunye novavanyo
Induction ukulahla amazinyo okufakelwa kunye nezinto ezifakwe kunyango
Ukuncipha kwetafile ukwenza iingcebiso zeecatheters zonyango
Ukucoca unxibelelwano kwimveliso yamayeza okanye yokuvelisa izinto eziphilayo
Ukunyanga kobushushu bealloys zememori kwizicelo zonyango
Inaliti kunye nezixhobo zotyando zokunyanga ubushushu kunye nokuma kobushushu
Amayeza okanye ukufudumeza kweplasma yegazi yezixhobo ze-IV
Induction Iinkqubo zokufudumeza zisetyenziswa kwiinkqubo ezininzi kumashishini ezonyango. Uhlobo lwezicelo zokufudumeza Induction oya kuzifumana zenziwe nge-catheter tip, i-dental drill bit brazing, iplastiki kukudibanisa isinyithi kunye nezinye ezininzi.
Zininzi izibonelelo zokusebenzisa ukufudumeza Induction ngaphakathi kwishishini lezonyango. Izibonelelo ziyinkqubo ecocekileyo kakhulu yokufudumeza ngaphandle kokunxibelelana esebenza ngamandla kunye nenkqubo yokufudumeza enedumela elihle. Induction ukufudumeza yindlela ekhawulezayo yokufudumeza izinto zakho ngendlela edibeneyo. Oku kuyakunceda ukuphucula imveliso yakho kunye nokuphucula uMgangatho.
I-induction coil solutions ineminyaka emininzi yolwazi ngaphakathi kwishishini lezonyango elixhasa abathengi ngomsebenzi wophuhliso olutsha kunye nokunceda kuyilo olutsha lwekhoyili kwizinto ezintsha. I-coil ye-induction Solutions ziye zanceda iinkampani ezininzi ze-blue-chip ngokugcina imigca yemveliso eqhuba nokuba zitshintsha ii-coil zokuFudumeza ngokuFakelwa ngokutsha, okanye zalungisa ii-Coil zokuFudumeza ii-Induction.
Isisombululo seMveliso yezoNyango kunye naMazinyo
Kuqoqosho olunamhlanje olukhulayo nokhuphiswano, iinkampani ezenza izixhobo zonyango zihlala zifuna iindlela zokunciphisa iindleko zokuvelisa kunye nokukhawulezisa ixesha lokuthengisa. Kwangelo xesha, ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokungaguquguquki kwemveliso kubaluleke kakhulu; kungabikho zinqumli xa ubomi besigulana nokuba sempilweni kwabo kusengozini.
Abavelisi besixhobo sonyango bajikela kubuchwephesha bokufudumeza ubushushu ukunceda ukuhlangabezana nemveliso, iindleko kunye neenjongo zabo zomgangatho. Ukufudumeza i-induction yindlela ekhawulezayo, ecocekileyo, engaqhakamshelani yokuphembelela ubushushu kwiindidi ezahlukeneyo zokujoyina isinyithi kunye nokusetyenziswa kokunyanga ubushushu. Xa kuthelekiswa nokuhanjiswa, ukukhanya, ilangatye elivulekileyo okanye ezinye iindlela zokufudumeza, ukufudumeza ubushushu kunika izibonelelo ezithile.
Ukonyuka kokungqinelana nolawulo lobushushu besimo esiqinileyo kunye neenkqubo zokujonga iluphu evaliweyo
Ukuveliswa okuphezulu kunye nokusebenza kweeseli; akukho xesha lokuntywila okanye lokujikeleza okupholileyo
Umgangatho ophuculweyo kunye nokuncitshiswa kwemveliso, ukugqwetha kunye nokwala amaxabiso
Ubomi obandisiweyo bokulungiswa kunye nobushushu obuchazwe kwindawo ethile ngaphandle kokufudumeza naziphi na iindawo eziyingqongileyo
Isandi esingqongileyo ngaphandle kwedangatye, umsi, ubushushu benkunkuma, ukukhutshwa okungathandekiyo okanye ingxolo enkulu
Ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ukuya kuthi ga kwi-80% yokusebenza kwamandla
Phakathi kwezixhobo ezininzi zokuvelisa izixhobo zokufudumeza ngaphakathi:
I-Annealing Incoloy Tubing kwiNdawo yokuKhusela
Ngombane wama-20kW, lokutshisa Ingasetyenziselwa ukufudumeza ityhubhu yentsimbi ukuya kuma-2000 ° F ngokudibanisa kwinqanaba le-intshi ezi-1.4 ngomzuzwana.
Iinxalenye zeBrazil zentsimbi yeOthodontic
Kule sicelo sisebenzise i-atmospheric ye-inert ukuhambisa iibhetshi zamalungu e-orthodontic kwi-1300 ° F kwisithuba se-1 yesibini
Ukuseta Ubushushu beNitinol kwiZonyango
Ukufudumeza induction kwakusetyenziselwa ukufudumeza iseti yezonyango kwi-mandrel ukuseta ubungakanani obufanelekileyo kwimizuzu emibini kwi-510 ° C.
Ukuqhawula indawo ezintathu eziDibeneyo kwiJet Prophy Jet
Ngasekunene ukucwangcisa ukukhenketha kwecoil design, kunokwenzeka ukubrasha amalunga amathathu ngaxeshanye. Kwimizuzwana elishumi, amalunga amathathu kwindibano yejethi yokuhambisa amazinyo afudunyezwe ukuya kwi-1400 ° F yokubhangqa ngokuphucuka kokuhambelana kwemveliso kunye nexesha lokuncitshiswa.
Ubushushu beStrakti esiXinyiweyo soMbane esiDibanisa isiXhobo kwiShell yePlastiki
Iziphumo ezingaguqukiyo, ezinokuphindwa zafezekiswa kwi-500 ° F ngomjikelo wobushushu wesibini we-10. Isinxibelelanisi sombane sasibotshelelwe siqokobhe leplastiki ngaphandle kokudanyaza okanye ukujika kombala.
iindidi Teknoloji tags ukufudumeza ezonyango, I-HF yonyango, yoqheliso brazing zonyango, ukufakwa kwamazinyo ukufudumeza, ukufudumeza amazinyo, ukufakelwa kobushushu kunyango, ukutshisa ukufudumeza amazinyo, ukufakwa kobushushu kushishino lwezonyango, ukutshisa ukutshisa umatshini wezonyango, yoqheliso imbawula zonyango, iheater yoqheliso lwezonyango Post yokukhangela